घरबेटीले किन निकाले पललाई डेराबाट ? - Filmy News Portal Of Nepal
पल शाह अहिलेका चर्चित नायक हुन् । म्युजिक भिडियोदेखी सिनेमामा समेत सक्रिय पल अहिले महंगो पारिश्रमिक लिने नायक मध्येमा पर्छन् ।
पल शाह र मलिका महतको सुपर हिट जोडी !
अभिनेत्री सरिता र निर्देशक ऋषि लामिछाने सहित छोरीलाई पनि कोरोना सं’क्रमण
म जापानमा रेष्टुरेण्टको शौचालय पनि सफा गर्थे ? म त्यहाँ कलाकार गौरी मल्ल थिइन (भिडियो)